Fitaovam-pitrandrahana anaty rano sy fitaovam-pikojakojana ny renirano - Dredges Ellicott
Fitrandrahana sy fikojakojana ny renirano
Ellicott Dredges dia mamolavola, manamboatra ary manome dredges portable kely sy salantsalany mety tsara amin'ny tetik'asa fampitrandrahana renirano maro karazana. Ny andian-dahatsoratra Ellicott Dragon® an'ny dredges suction cutterhead Hita amin'ny habe sy haben'ny fandavaka isan-karazany, ary mety amin'ny fitrandrahana karazan-tany sy fitaovana matevina toy ny fasika, vatokely, silt ary tanimanga. Ireo dredge renirano azo entina ireo dia azo ampiasaina amin'ny tetikasam-pitrandrahana renirano kely na lehibe, anisan'izany ny fanalefahana ny rano sy ny fikojakojana ny fantsona.
Ny olona monina amin'ny tanàna lehibe erak'izao tontolo izao dia miankina amin'ny renirano ho loharanon'ny sakafo, rano madio ary fitaterana. Rehefa mandeha ny fotoana dia miangona ny silt, sediment ary tahiry hafa, izay matetika no manakantsakana na manova ny fikorianan'ny natiora iray ary ny tanjaka. Tetikasa fanovozana renirano dia natao hanakanana ny fikaohon-tany, hampitombo ny làlan'ny fivezivezena ary hanome fanalefahana ny tondra-drano.
Fisorohana ny fikaohon-tany
Rehefa mikorontana ny fantson'ny renirano iray dia manomboka mihena tsimoramora ny moron'ny renirano any amin'ny faritra hafa amin'ilay renirano rehefa miakatra tsikelikely avy eo ilay toerana ka hatrany amin'ny ilan'ny ony iray. Vokatr'izany dia nitombo ny hafainganan'ny renirano iray ka nahatonga ny fihoaran'ny renirano sy ny fikaohon-drano teo amoron'ny renirano, ka nalemy ny faritra hafa amin'ny fantson'ny renirano. Rehefa mandeha ny fotoana dia mampitombo ny toe-javatra miharatsy ny rafitry ny renirano ny fitahirizana antsanga.
Ny dredges dia ampiasaina hanalana ny antsanga be loatra ao anaty renirano. Ny fanafoanana an'io sediment io dia mamerina ny laoniny sy ny halalin'ny fantsona, mampiorina ny fefiloha manodidina, ary mampihena ny fikaohon-dranomasina ho avy.
Fikojakojana ny halalin'ny renirano
Manangona fofona voajanahary sy vokarina ny fantsom-pifamoivoizana rehefa mandeha ny fotoana, izay mitaky fanodinana matetika amin'ny fikojakojana ny fantsom-pifandraisana mety. Rehefa miakatra ao amin'ny ilan'ny renirano ny sediment dia mampihena ny halalin'ny renirano.
Ny dredges dia matetika ampiasaina mba hamafana ny fasika, silt ary sediment be loatra avy amin'ny fantson'ny renirano mamela ny sambo sy ny sambo hafa hitety ony soa aman-tsara.
Ny renirano izay tsy voatazona dia manangona silt, fasika ary sedimentation be dia be, izay mety hiteraka fantsakan-drano. Ny famatrarana tavoahangy dia mametra ny fahafahan'ny ony mikoriana voajanahary ary hiteraka fisondrotan'ny rano amin'ny faritra hafa amin'ilay renirano ary hihoatra ny sisin'ny renirano. Rehefa be loatra ny rano miditra amin'ny rano feno sediment amin'ny hafainganam-pandeha haingana dia mitranga ny tondra-drano.
Ny fisitrihana ny renirano dia tsy misakana ny tondra-drano, fa mampihena ny sasany amin'ireo loza mety hitranga. Ny dredging dia zava-dehibe amin'ny fitehirizana ny rano voajanahary amin'ny renirano ary mampihena ny mety hitrangan'ny loza mety hitranga amin'ny tanàna izay mora tratry ny tondra-drano mandritra ny fotoanan'ny orana.
In Buenos Aires, Arzantina dia nampiasaina mba hitrandrahana fantsona lalina kokoa ary esory ny antsanga be loatra avy amin'ny Lohasahan-drano Salado amin'ny toerana iva misy ny tondra-drano. Sarotra ny tratra ny faritra sasany amin'ny renirano, saingy nahavita nanaparitaka sy nanangona ny sambo fiara ny ekipa nahafahan'ireo ekipa manohy mitrandraka mafy any amin'ny toerana akaiky ny renirano. Ny fasika nesorina nandritra ny tetik'asa dia nampiasaina hanatsarana ny lemaka iva ary hanatsarana ny haavon'ny moron'ny rano mba hampihenana ny tondra-drano amin'ny ho avy.